ငါ့အချစ်တော်တိရစ္ဆာန်များချိန်းတွေ့ » ကိုယ်တော်၏ Type နေရာမှာမဟုတ်သူတစ်ယောက်ချိန်းတွေ့ကြိုးစားသင့်အဘယ်ကြောင့်
အစဉ်အဆက်အဘယ်မှာရှိသင်၏မိတ်ဆွေများသို့မဟုတ်မိသားစုသူတွေကိုကြိမ်ရှိခဲ့, သူတို့သိသူတစ်ဦးဦးနှင့်အတူရက်စွဲပေါ်တွင်သင်ထူထောင်ရန်စိတ်အားထက်သန်, သင့်အဘို့အသွားသူတစ်ဦး၏အဘယ်သို့သောအမျိုးအစားကိုမေး?
လူတိုင်းနီးပါး၏အပြစ်ရှိကြောင်း It-ကြေငြာသူတို့ partner ၏အမျိုးအစားသို့မဟုတ် preference ကိုအချို့မျိုးရှိသည်ဆိုသောအချက်ဖြစ်ပါသည်.
လူတွေကအကြောင်းပြောဆိုရှိသမျှတို့သည်အချိန်ကိုကြား: "ငါသာရက်စွဲအနုပညာ-type ကိုလူတွေကကျွန်မအနုပညာရှင်တစ်ဦးရယ်ကြောင့်" သို့မဟုတ် "ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအဖြစ်အလားတူအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းနယ်ပယ်များတွင်လူချိန်းတွေ့ဖို့ကိုလိုလားကြပါတယ်။ "
သို့သော်လည်းထိုသူတို့သည်သင်၏ "စံပြအမျိုးအစား" fit မကြောင့်သင်တို့ကိုကြီးစွာသောဖမ်းအပေါ်စီးအဘယ်သို့လျှင်?
ဒီမျှမျှတတဖြစ်လေ့ဖြစ်နိုင်, အထူးသဖြင့်အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့နှင့်အတူ. သင့်ရဲ့မျက်စိငယ်များတဲ့ပရိုဖိုင်းကိုဖြတ်ပြီးလာ, သူသည်သင်၏စံပြအိမ်ထောင်ဖက်စစ်ဆေးရမည့်စာရင်း fit မဟုတ်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့ stats ဖတ်ရှုပြီးနောက်သင်မြန်မြန်ဆန်ဆန်ပေါ်ရွှေ့. ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့ type ကိုအရပ်ရှည်ရှည်ဖြစ်, ကြွက်သားယောက်ျားသော်လည်းသူ၏ပရိုဖိုင်ကိုသူသာ 5'6 "နှင့်သာလေ့ကျင့်ခန်းတွင်အတန်အသင့်စိတ်ဝင်စားမယ့်ဒါမှမဟုတ်သင့်ရဲ့ဆံပင်ရွှေရောင်အမျိုးအစားကပြောပါတယ်, အရှေ့ဥရောပအမျိုးသမီးနှင့်သူမတစ်ဦး brunette သြစတြေးလျင်. သူတို့တစ်ဦးကိုချက်ချင်းပွဲစဉ်ဖြစ်ပေါ်လာမပေးတဲ့အတွက်အလိုအလျှောက်သူတစ်ဦးဦးကိုချွတ်မရေးပါ.
အလားတူအကျိုးစီးပွားအပေါ်အခြေခံပြီးသူတစ်ဦးဦးနှင့်အတူ connection တစ်ခုတည်ထောင်မည်သင့်ပါသည်, ယုံကြည်ချက်တွေနဲ့ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်. သင်တိကျသောလမ်းညွှန်ချက်များ fit တစ်စုံတစ်ဦးကိုရှာတွေ့အပေါ်အလွန်အကျွံအာရုံစိုက်မယ်ဆိုရင်သင်ချိန်းတွေ့သည့်အခါလိုက်နာလိုသော, သင်အလားအလာကောင်းသည့်တစ်ဦးသည်ကြီးမြတ်တဲ့ဆက်ဆံရေးကိုတည်ဆောက်မှာသင့်ရဲ့အခွင့်အလမ်းတွေကိုအားဖျက်ဆီးခြင်းကိုခံရနိုင်.
သင်သာကိုယ့်ကိုယ်ကိုသင့်ရဲ့ type ကိုမူယနေ့အထိခွင့်ပြုလိုက်တဲ့အခါ, သင်ရုံအဟောင်းပုံစံများကိုထပ်တလဲလဲရွတ်ဆိုစေခြင်းငှါ. သင်သည်အတိတ်ဆယ်နှစ်လူတစ်ဦး၏တူညီသောအမျိုးအစားရက်စွဲပါင်နှင့်ဆက်ဆံရေးကိုအဘယ်သူမျှမထုတ်အလုပ်လုပ်ခဲ့ကြလျှင်, ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ရုံသီးသန့်သင်နှစ်သက်တဲ့အမျိုးအစားချိန်းတွေ့ခြင်းအားပြန်လည်စဉ်းစားသင့်တယ်. သင်ထပ်ခါထပ်ခါလူတစ်ဦး၏တူညီသောအမျိုးအစားချိန်းတွေ့ကြတဲ့အခါမှာ, ဆက်ဆံရေးပုံမှန်အားဖြင့်အတူတူပင်အဆုံးရလဒ်တွေရှိပါတယ်.
တိကျတဲ့အမျိုးအစားချိန်းတွေ့အဆင်ပြေနှင့်ညီညွတ်သောဖြစ်လာနိုင်ပါသည်. သင့်ရဲ့အမျိုးအစားမဟုတ်သူတစ်ဦးဦးနှင့်ချိန်းတွေ့, ကွဲပြားခြားနားသောတစ်စုံတစ်ဦး, သင်အခွင့်အလမ်းအသစ်သောအရာကြိုးစားလျက်အသက်တာသစ်အတွေ့အကြုံများကိုရရှိစေနိုင်တယ်. သင်သည်ကိုယ်ကိုထက်ကွဲပြားခြားနားသောဝါသနာရှိသူတစ်ယောက်နှင့်ချိန်းတွေ့တစ်စုံတစ်ဦးကကြိုးစားလျှင်, သင်တကယ်ကိုပျော်မွေ့နိုင်အသစ်လှုပ်ရှားမှုများကြိုးစားနိုင်ကြ. သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ထက်ကွဲပြားခြားနားသောအမွေမှချိန်းတွေ့တစ်စုံတစ်ဦးကိုသင်အသစ်များအစားအစာများနှင့်ယဉ်ကျေးမှုကိုတွေ့ကြုံခံစားရန်ခွင့်ပြုနိုင်သည်.
ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်စေရန်, ငါသည်သင်တို့ကိုသင်တို့ဆီသို့ပိုတူညီပြည်တွင်းရေး core ကိုတန်ဖိုးများကိုမျှဝေသောသူနှင့်ချိန်းတွေ့လူတွေကြိုးစားအကြံပြုခြင်းပါ၏ (ထိုကဲ့သို့သောကိုမှီခိုအဖြစ်, သစ္စာစောင့်ခြင်းသို့မဟုတ်သဘောထားကြီးမှု), ပြင်ပအကြောင်းအချက်များပေါ် အခြေခံ. အခြားသူများကိုရွေးချယ်ရာတွင်ဆန့်ကျင် (ထိုကဲ့သို့သောပုံပန်းသဏ္ဌာန်အဖြစ်, လူမျိုးရေးသို့မဟုတ်လူမှုရေးအဆင့်အတန်း). အလားတူ core ကိုတန်ဖိုးများကိုမျှဝေသောသူမိတ်ဖက်လိုက်ရှာကပ်သင့်ပါသည်. သင်ကမိသားစုနှင့်အတူနှစ်အနည်းငယ်အတွင်းအခြေချရန်လိုပါလျှင်, တစ်မိသားစုကိုစတင်ရန်မရည်မှန်းချက်ကြီးရှိသည်သောလူတစ်ယောက်နှင့်ချိန်းတွေ့မစတင်ပါနဲ့. သို့သော်, ကိုယ်ထိလက်ရောက် partner ၏သင့်စံပြ type ကို fit မပြုစေခြင်းငှါအဘယ်သူသည်သင်တို့ကိုတစ်စုံတစ်ဦးကိုရှာဖွေလျှင်, သင်မူကား, ရေရှည်ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်နှင့်ယုံကြည်ချက် shared ပါပြီ, ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးသင်သည်ထိုသူတို့အခွင့်အလမ်းပေးသင့်ပါသည်.